यति महङ्गो गाडी चढ्छिन् नायिका श्वेता खड्का – All top Here
Home/मनोरंजन/यति महङ्गो गाडी चढ्छिन् नायिका श्वेता खड्का
विवाह भएको १ महिनापनि राम्रोसँग बित्न नपाउँदै एक्लिएकी श्वेताको जिन्दगी नै अध्यारो बन्यो,उनी भन्छिन् : त्यो समय अब त केही गर्न सक्दिन होला जस्तो लागेको थियो’ तर; फेरि बाँचेर आएँ म।चलचित्र कहाँ भेटिएला र कोहिनुरमा स्व. अभिनेता श्री कृष्णको जोडी बनेर पर्दामा देखिएकी श्वेतालाई पुन पर्दामा फर्किन मुस्किल पर्यो । अन्ततः स्व. श्रीमानको सम्झना “कान्छी” फिल्म निर्माण गरेर अभिनेता दयाहाङ राई सँग पर्दामा देखिइन् , चलचित्र सफल पनि बन्यो ।
श्वेता खड्का कलाकार मात्र नभई उनी एक सफल व्यवसायी पनि हुन् । हिमालय जाभामा उनको ठूलो व्यापार छ । सामाजिक कार्यमा समेत सक्रिय खड्काले सिन्धुपाल्चोकमा माझी बस्ति निर्माण गरेकी छिन् ।नेपाली कुन कलाकारले कस्तो गाडी चढ्छन्, कति महङ्गो गाडी चढ्छन् भन्ने सबैको मनमा लागेको हुन्छ । गाडिको मामलामा नायिका खड्का एक नं हुन् भन्दा फरक नपर्दा किनकि उनी भन्छिन् नयाँ गाडी देख्यो कि किन्न मन लाग्छ ।अहिले उनले चडिरहेको गाडीको मूल्य १ करोड हाराहारीमा पर्दछ ।
रामकृष्णले पत्नी निलमसँग किन गरे ‘फेक डि’भोर्स’ ? यस्तो रहेछ मार्मिक कारण !